Free Forex VPS | Forex Trading mepụtara Onwe Server
Home / Enyemaka Forex / Onyinye Forex Enyemaka / VPS efu
Na FXCC, anyị na-enye ndị ahịa anyị ike na ụlọ ọrụ iji ahia site na iji ọrụ VPS (ọrụ nzuzo nke onwe). E nwere uru atọ dị oke egwu n'iji VPS iji kwalite arụmọrụ ahịa; ọsọ, nchekwa na ịnweta. Nke a bụ mkpirikpi mkpirikpi nke ọ bụla.
FXCC na-enye VPS Bochum dị ka ọnụ ahịa dị oké ọnụ ma jikwaa usoro ọzọ nke nwere ike ịnweta njikọ ọsọ ọsọ nke dị nnọọ nso maka ngwa ahịa maka ngwa ahia. Na-enye ntaramahụhụ ala ma na-ekwenye na ngwa ngwa dị n'etiti: Brokers, platforms major brokers and networking networking such as FXCC's ECNs, na-arụpụta ka mma mmezi ahia-egbu usoro.
Ma ahia na (na site na) MetaTrader, ma ọ bụ iji ngụkọta azụ azụ na azụmaahịa, nchebe bụ akụkụ dị oke egwu nke ahịa VPS. Enwere uru na nketa nke ọma site na nbudata ngwa ngwanrọ gaa na ntanetị nke onwe ya na Windows 'Server VPS na-echekwa ya mgbe niile iji chebe ma sava ma ndị ọrụ sitere n'aka ndị omempụ na egwu ndị ọzọ. N'ihe banyere ngwaike anụ ahụ, a na-elezi nlekọta dị ukwuu iji gbochie ọdịda dị egwu. Ejiri 24 / 7 na-echekwa ihe nkesa na isi ihe nkesa ma na-ejikwa 24 / 7 na-ejikwa ya rụọ ọrụ nke ọma na mpaghara nkwado ọrụ.
Inwe ihe nkesa ị raara onwe gị nye iji na-agba ọsọ ahịa gị, na-enyere aka hụ na ị na-agba ọsọ. Ọ bụrụ na, dịka ọmụmaatụ, ị na-arụ ọrụ ebe nrụọrụ weebụ nke gị site na ụlọ, ị gaghị anara ya na kọmputa gị, ọ bụ ezie na ngwa ngwa ọ nwere ike ịbụ, ma ọ bụ ezie na ngwa ngwa njikọ netwọk fiber optic nwere ike ịbụ. Ị ga-anakwere ya na ihe nkesa raara onwe ya nye, nke ndị ahịa gị nwere ike ịnye ngwaahịa gị ngwa ngwa ma rụọ ọrụ nke ọma dị ka o kwere mee, dịka o kwere mee ma nweta ahịa gị iri abụọ na anọ n'ụbọchị. Ahịa gị agaghị emechi ma ọ bụrụ na ị gbanyụọ kọmputa gị na netwọk na abalị. Ọ bụ ọnọdụ yiri nke ahụ iji nweta ihe mgbe ị na-azụ ahịa; ọ bụrụ na ha na-agba ọsọ ngwa ngwa ha ga-azụ 24-7, a ghaghị ịmepụta ihe nkesa / raara onwe ya nye otu ọrụ gị, ahia.
A na - ewukwasị ngwá ọrụ na ogbugba ndu na ọrụ VPS zuru ezu, dịka Ụlọ ọrụ na Desktọpụ nke na - enye ohere ka ndị ọrụ jikọọ na sava ha raara onwe ha nye - VPS site na ebe ọ bụla, na - enweghị ntọala ọzọ, ma ọ bụ nhazi chọrọ. Ndị ahịa nwere ike ịnweta ntanetị ahịa site na ngwaọrụ dị iche iche: PC, laptọọpụ, mbadamba, na smartphones, na-enweghị igbochi software na-agba ọsọ na VPS. Iji VPS ọtụtụ nyiwe na ọtụtụ akụkọ nwere ike ịmepụta n'otu VPS ahụ, na-enyefe ohere onye ọrụ, iji mee ka ndị ọrụ ọtụtụ jiri elele desktọọpụ n'otu oge, enwere ike ịnye ntụziaka, site na iche iche ebe.
Iji tinye maka VPS n'efu gị, banye na ahịa Hub, gụọ Okwu & Ọnọdụ ma mee arịrịọ gị.
Nweta VPS anyị